‘मान्छेहरु मलाई देखेर अझै थाकेका छैनन्’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘मान्छेहरु मलाई देखेर अझै थाकेका छैनन्’
प्रकाशित मिति १६ असार २०७५, शनिबार १७:२० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सिने उद्योगमा स्थापित सबै स्टारहरुले आफ्नो करिअरको सुरुवात प्रायः सानो भूमिकाबाट गरेका हुन्छन् । सानो भूमिकाबाट करिअरको सुरुवात गरेपनि उनीहरुले पछि भने सिनेमामा रजाँई गरेका हुन्छन् । यही मध्येका एक स्टार हुन् दक्षिण भारतीय सिनेमाका कमेडियन ब्रम्हानंदम ।
सन् १९५६ फेब्रुअरी १ मा आन्ध्रप्रदेशमा जन्मेका ब्रम्हानंदमको परिवाको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । यही कारण उनको परिवारबाट एमएसम्मको अध्ययन गर्ने उनी मात्र पहिलो सन्तान थिए । अध्ययन सकेपछि उनले एक तेलुगु लेक्चररको रुपमा कलेजमा पढाउन थाले । उनी कलेजमा प्रायः विद्यार्थीलाई मिमिक्री गरेर हँसाउथे । एकपटक उनलाई ईंटर कलेज नाटक प्रतियोगितामा बेस्ट सपोर्टिङ कलाकारको पुरस्कार मिल्यो । त्यसपछि उनको रुची नाटक तर्फ बढ्न थाल्यो ।
नाटकमा काम गर्ने क्रममा तेलुगु फिल्मका चर्चित निर्देशक जन्धयालाले उनलाई बोद्दाबाई नामको नाटकमा अभिनय गर्दै गरेको देखे । त्यही अभिनयबाट जन्धयाला प्रभावित भए र चान्ताबाई नामक फिल्ममा ब्रम्हानंदमलाई सानो भूमिका दिए । यही फिल्मबाट १९८५ मा ब्रम्हानंदमको सिने करिअर सुरु भयो ।
पहिलो सिनेमाको काम मन पराएपछि जन्धयालाले उनलाई दोस्रो सिनेमामा पनि लिए । दोस्रो सिनेमामा आहा न पेल्लानतामा उनले गरेको अभिनय धेरैले मन पराए र दोस्रो सिनेमाबाटै ब्रम्हानंदम सिनेमाको चर्चित अनुहार बन्न पुगे । अहिलेसम्म उनले एक हजार भन्दा धेरै सिनेमामा काम गरेका छन् । अहिले उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत एक करोड पारिश्रमिक लिन्छन् ।
आफूले सिनेमामा पाएको ब्रेकबारे ब्रम्हानंदम भन्छन्– म माता पिताका आठ सन्तान मध्ये सातौं नम्बरमा जन्मेको हुँ । भगवानलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु । किनकी मैले बाल्यकालदेखि नै अरुलाई हँसाउन सफल भएको छु । मेरा एकदमै मिल्ने साथी एमसिबी शशिधर, उनी डि डि ८ मा चिफ प्रोगामिङ अफिसर थिए । उनले मलाई चर्चित लेखक आदि विष्णुको घरमा लगे । आदि विष्णुले मलाई –तिमी निकै राम्रो स्टैंड कमेडी गर्न सक्छौ जसलाई टेलिभिजनमा अनएअर गर्न सकिन्छ भने । त्यसपछि मलाई जन्धयालाले सन् १९८५ मा पहिलो ब्रेक दिएका हुन् ।
मलाई देखेर दर्शक थाकेकै छैनन्
मलाई लाग्छ सबै अभिनेताहरुले मैले जस्तै कडा मेहनत गर्छन् । तर मानिसहरु अझै पनि मलाई देखेर थाकेका छैनन् । यही कारण भगवानले मलाई, मात्र अरुलाई हँसाउनको लागि यस धर्तिमा पठाएको जस्तो लाग्छ । एक पटक मेरो साथीको छोराले मलाई सोध्यो ‘तपाईँको नाम ब्रम्हानंदम कसले राख्यो ?’ मेरा पिताले पनि मलाई कहिल्यै मेरो नाम ब्रम्हानंदम किन राखियो भनेर भन्नु भएन । तर मेरो नामको अर्थ हो द ह्याप्पीनेस अफ द युनिभर्स । पुरै ब्रहमाण्डको आनन्द ।
आफ्नो व्यस्तताबारे के भन्छन् उनी ?
तीन दशकपछि पनि ब्रम्हानंदम सिनेमामा उत्तिकै व्यस्त छन् । यस प्रश्नमा उनी भन्छन्–एक भनाई छ नि ‘ताजा पानी सधैँ बासी पानीलाई रिप्लेस गर्छ ,तर भाँडो भने एउटै रहन्छ ।’ म पनि फिल्म उद्योगको यस्तै भाडो हुँ ।
निर्देशक वीर बिक्रमले मलाई एकपटक भन्नुभएको थियो ‘तिमी भगवानको दर्शन गर्न लामो समय प्रतिक्षा गरेर लाईन बस्छौ अनि भगवानलाई भेटेपछि सबै कुरा बिर्सन्छौ । मैले तिमीलाई भगवानसँग तुलना गर्न खोजेको भने हैन तर जब मानिसहरु तिमीलाई हेर्छन् सबै कुरा बिर्सेर हाँस्न थाल्छन् ।’
काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकका केही प्रावधानप्रति…
दमौली । पोखरा–७ मासबार निवासी सिर्जना राउतले बिहेको खुशी यति चाँडै बिलाउला भन्ने सपनामा पनि सोचेकी थिइनन् । बिहे…
‘श्रीमान होइन, असल साथी गुमाएँ’
काठमाडौं । सहकार्यदेखि प्रेम र विवाहसम्म : रवीन्द्र अधिकारी सरकारात्मक सोच भएको, अरुको दुःखमा साथ दिन खोज्ने, देशलाई माया…
करोडौँको गाडी गृहबाट गायब
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयबाटै दुई करोड बढी पर्ने एउटा गाडी गायब भएको रहस्य खुलेको छ । एक जलविद्युत् परियोजनाले…
यौन सम्बन्धलाई कसरी आनन्दित र स्मरणीय बनाउने ?
काठमाडौं । यौन एक प्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै…
काठमाडौं । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालमाथि काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवामा घुस…